Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka furmay shir horudhac u ahaa kan Bishan gudaheeda ka furmaya Magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Shirkan oo ay ka qeyb galeen Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka oo ay ka mid yihiin Wasiiro, Xildhibaano, Dowlad Goboleedyada, Bulshada rayidka ah, Qurbajoogta, Beesha caalamka iyo xubno kale oo lagu uruuriyay talooyinkii lala tagi lahaa shirka weyn ee London.
Shirkan ayaa waxaa xoogga lagu saaray in Ajande loo sameeyo shirka London, waxaana la iswaafajiyay rabitaanka Beeesha caalamka iyo waxa ay doonayaan dadka Soomaaliyeed.
Iyadoo kulankani looga dooday arrimaha Amaanka, Siyaasadda, soo afjaridda Ciidanka ku howlgalayo magaca AMISOM iyo Kobaca dhaqaalaha dalka.
Mudane, C/raxmaan Ceynte oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta ahna qaban qaabiyaha shirka London ayaa sheegay shirkan uu yahay mid caalami ah oo ilaa iyo 40 dal iyo Hay’addo waawayn ay ka soo qeyb galayaan.
Shirkan ayaa waxaa si wadajir u hoggaamin doona Dowladda martigelinaysa ee Ingariiska, Qaramada Midoobay iyo Dowladda Soomaaliya, waxana uu shirkani ka dhacayaa magaalada London 10-ka ilaa 11-ka May ee sanadkan.
May 2, 2017 Geesey
War-Murtiyeed Maanta Laga soo Saaray shirkii Golaha Amniga Qaranka (VIDEO) July 10, 2017